thinzar's blog: Farm Town Craze
Farm Town Craze
ကွန်ပျူတာဂိမ်းတွေ မကစားဖြစ်တာ တော်တော်ကြာနေပြီ။ ၁ဝတန်းအောင်ပြီးတုန်းကနေ 2nd year ပြီးတဲ့အထိလောက် နေ့နေ့ညည ဂိမ်းကစားတာ မျက်မှန် တပ်လိုက်ရတဲ့ အထိဘဲ။ နောက်ပိုင်း သိပ်မကစားဖြစ်တော့ဘူး။ အရင် နှစ်ပါတ်လောက်က NativeMyanmar ဖိုရမ်ထဲမှာ Facebook က ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Farm Town အကြောင်း ရေးထားတာတွေကို ဖတ်ရတော့ ကစားကြည့်ချင်စိတ် ပေါက်လာတယ်။ အဲဒီဂိမ်းက လယ်စိုက်ရတာ။ စစချင်း ထွန်ယက်ရတယ်။ ပြီးရင် အာလူး၊ စတော်ဘယ်ရီ၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ စပါး၊ ဂျုံ၊ နေကြာပင်၊ ကော်ဖီ မျိုးစေ့တွေ ဝယ်ပြီး စိုက်ရတယ်။ တစ်ချို့ ကောက်ပင်တွေက တစ်ရက်နဲ့ ရိတ်သိမ်းလို့ ရပြီး တစ်ချို့ ၂ရက် သုံးရက် ကြာတယ်။ ရိတ်သိမ်းပြီးရင် ဈေးမှာ သွားရောင်း။ ရတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ လယ်ထပ်စိုက် ဒါနဲ့ သံသရာ လည်နေတာပေါ့။ ကိုယ့်မှာ ပိုက်ဆံကုန်သွားရင် ဈေးထဲသွားပြီး အလုပ်သွားရှာလို့ ရတယ်။ Hire me.. plz hire me လို့သာ အော်နေရင် တစ်ယောက်မဟုတ် တစ်ယောက် က လာငှားတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အပင်တွေ ရိတ်သိမ်းတဲ့ အခါကြရင် သူများကို ငှားပြီး ရိတ်ခိုင်းရင် ကိုယ်လည်း သက်သာတယ်။ ပိုက်ဆံလည်း မပေးရတဲ့အပြင် သူများ ရိတ်သိမ်းပေးတဲ့ဆန်တွေ ဂျုံတွေ အာလူးတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ် ရိတ်သိမ်းတာထက် ရောင်းတဲ့အခါ ဈေးပိုရတယ်။ ရိတ်သိမ်းပေးတဲ့သူကလည်း အပင်တွေရဲ့ ၂၅% ကို ရတယ်။
ဒါက စစချင်း သိပ် မတတ်ခင်တုန်းက စောင်းစောင်း ရွဲ့ရွဲ့နဲ့ ထွန်ယက်ထားတဲ့ လယ်ကလေး။ အဲဒီတုန်းက ပိုက်ဆံ တစ်ပြားမှ မကျန်တော့တော့ ဈေးထဲမှာ hire me.. hire me နဲ့ သွားအော်နေတာ။ လူတစ်ယောက်က လာငှားသွားပြီး ကော်ဖီခင်း အကြီးကြီး တစ်ခင်လုံး ရိတ်လိုက်ရတာ တော်တော် ပိုက်ဆံရလိုက်တယ်။ နောက်ပိုင်း အဲဒီလောက် ကံမကောင်းတော့ဘူး။ အငှားခံရရင်လည်း သုံးယောက် လေးယောက် ငှားတာဆိုတော့ အပြိုင် လိုက်ရိတ်သိမ်းနေရတယ်။ ကိုယ့်လယ်တွေ သီးပြီဆိုရင်လည်း သူငယ်ချင်းတွေ online ရှိမရှိကြည့်၊ မရှိရင် ဘယ်အချိန်လာမလဲလို့ ဖုန်းနဲ့မေးရတာလည်း အလုပ်တစ်ခု :D ရိုးသားကြိုးစား လယ်သမား လုပ်နေတာ။ စာတောင် ဒီလောက် မကြိုးစားဖူးဘူး။
အားလုံး real-time ကစားနေတာကြောင့် ဈေးထဲမှာ ကမာ္ဘအနှံ့က ကစားနေတဲ့သူတွေကို တွေ့နိုင်တယ်။ ဈေးကသူတွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်လယ်ကို လာလည်တဲ့သူတွေနဲ့လည်း chat လုပ်လို့ ရတဲ့ function လည်းပါတယ်။ သူများတွေ စိုက်ထားတဲ့ လယ်ကွက်တွေထဲကို လိုက်လည်ရတာလည်း ပျော်စရာ တစ်မျိုးဘဲ။ အခုတော့ level 18 ရောက်နေပြီ။ မကြာခင် လယ်ထပ်ချဲ့လို့ရပြီ။ level က experience point အရ တက်သွားတာ။ ဥပမာ စပါးတို့ ကော်ဖီတို့ စိုက်ရင် ရိတ်သိမ်းပြီး ရောင်းတဲ့အခါ မြိုးမြိုးမြက်မြက် ရပေမယ့် သုံးရက်လောက်နေမှ ရိတ်သိမ်းလို့ ရတာဆိုတော့ experience point က သိပ်မတက်ဘူး။ အစပိုင်းတော့ experience point မြန်မြန်တက်အောင် အာလူးချည်း ဖိစိုက်ပစ်တယ်။ ၁ရက်ကြာမှရိတ်သိမ်းလို့ရမယ့်အပင်ဟာ နောက်တစ်ရက်ကျော်သွားရင် ပျက်စီးသွားတယ်။ အဲဒီတော့ ကိုယ်အားမယ့်အချိန်၊ online တက်ဖြစ်မယ့် အချိန်နဲ့ ကိုက်ပြီး စိုက်ရသေးတယ်။ ဥပမာ - နှစ်ရက်လောက် အင်တာနက် မသုံးဖြစ်ဘူးဆိုရင် သုံးရက်လောက် ကြာမယ့် ကော်ဖီတို့ နေကြာပင်တို့ စိုက်ခဲ့လိုက်တယ်။ အပေါ်ကပုံက သုံးရက်လောက် ကစားဖြစ်မှာ မဟုတ်လို့ ကော်ဖီနဲ့ နေကြာစိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်။
ဒါက အပျင်းပြေ ဟိုတစ်ကွက် ဒီတစ်ကွက် စိုက်ထားတဲ့လယ်။ ကစားနေတာမလို့ပေါ့။ တကယ်အပြင်မှာတော့ အဲလို ကွက်ကြား ကွက်ကြား လယ်စိုက်ရင် အပင်တွေ အောင်ပါ့မလားတောင် မသိဘူး။
အခု လက်ရှိ အခြေအနေ။ စပါးတွေချည်း အဓိက စိုက်ထားတယ်။
လယ်ကွက်က 16x16 ရှိသွားပြီ။ မကြာခင် 18x18 ကို ချဲ့လို့ရပြီ။ ဒီဂိမ်းကစားပြီ စွဲနေတာ၊ လမ်းသွားလို့ လမ်းဘေးဝဲယာမှာ ငှက်ပျောပင်၊ အုန်းပင်တွေ တွေ့ရင် Farm Town ထဲက အပင်လေးတွေကို သတိရမိပြန်ရော။ ဘယ်level ရောက်ရင် ပျင်းပြီး ရပ်သွားမလဲဆိုတာ သိချင်လို့ ဆက်ကစားကြည့်ဦးမယ်။ ဒီလိုနဲ့ လယ်စိုက်လိုက်၊ ရိတ်သိမ်းခါနီးကြတော့ ပင်ပင်ပန်းပန်းစိုက်ထားတဲ့ လယ်ကလေးကို ဒီအတိုင်း ရိတ်ပစ်ရမှာ နှမြောတာနဲ့ screenshot ရိုက်ပြီး save ထားတာ။ ဘယ်လောက် ရူးသလဲဆို :D .. ဘလော့ဂ်ရေးဖို့ ပို့စ်တစ်ခု ရသွားလေသတည်း။
လယ်တွေကို ဒီလိုထပ်ပြီး စိုက်လို့ရတယ်ဆိုတာ အခုမှသိတယ်။ ဒီနည်းက IE မှာဘဲ အလုပ်လုပ်တယ်။ တစ်ခြား browser နဲ့ဆို မရဘူး။ ပထမဆုံး ညာဖက်ဆုံးက လယ်တစ်ကွက်ကို အရင် plow လုပ်လိုက်။ ပြီးရင် ဒုတိယ လယ်ကို plow လုပ်ဖို့ mouse နဲ့ထောက်၊ အစိမ်းရောင်အကွက်ကလေးရပြီဆိုရင် right click နှိပ်လိုက်။ ပြီးရင် ပထမ ထွန်ထားတဲ့ လယ်ပေါ်မှာ left click နှိပ်။ အဲလိုဆို ထပ်ပြီးသား ဖြစ်သွားရော။ သိသွားတော့လည်း လွယ်မှလွယ်။ ဒီနည်းနဲ့ဆို ပိုက်ဆံ မြန်မြန်ဝင်ပြီး level မြန်မြန်တက်တယ်။ သဉ္ဖာ့ကွန်ပျူတာမှာ IE crash ဖြစ်နေတာ ကြာပြီ။ သုံးလည်းမသုံးတော့ fix လုပ်ရမှာလည်း ပျင်းတာနဲ့ ဒီအတိုင်း ထားထားတာ။ ရုံးမှာ testing တွေ ဘာတွေ လုပ်ရင် IE သုံးလို့ မရဘူးလို့ ဆင်ခြေပေးပြီး တစ်ခြားသူကို လုပ်ခိုင်းတာ :D လယ်စိုက်ဖို့လိုအပ်မှ IE ကို ကြိုးကြိုးစားစား fix လုပ်တာ သိရင်တော့ .. အင်း.. ချီးကျူးမှာတော့ မဟုတ်ဘူး။ သေချာတယ်။
အလုပ်မှာ ဝင်မရတော့ ညနေပိုင်း ခနပဲ ကစားဖြစ်တယ်.. ခုရက်ပိုင်း တခြား ဂိမ်းတွေပါ ကစားနေတာ့ လယ်စိုက်ဖို့နေ ့တိုင်း အချိန် မပေးနိုင်တဲ့ အတွက်.ကော်ဖီပဲ စိုက်တော့တယ်.. လယ်ဗယ်က 23 .. လယ်က 22x22 .. ဒါကတော့ ကြွားတာ.. :D.. လယ်အများဆုံး ချဲ ့လို ့ရတာ.. 24x24 , level 25 လိုတယ် ဆိုတော့ အဲဒီအထိရောက်အောင်တော့ ဆက်ကစားဖြစ်မယ် ထင်တယ်..
8/4/09 3:11 PM
အစ်မရယ်.. ခနဘဲ ကစားဖြစ်လို့သာ တော်တော့တယ်။ level တက်သွားတာ မြန်လိုက်တာ။
ဟုတ်တယ်နော်။ လယ်ထပ်ချဲ့လို့မရရင် ဘာအတွက် ကစားဖြစ်နေဦးမလဲတော့ မသိတော့ဘူး။ ပိုက်ဆံတွေဘဲ များများလာပြီး ဘာမှ ဆက်လုပ်ဖို့ မရှိတော့ရင် ပျင်းစရာကြီး ဖြစ်သွားမှာ
8/4/09 3:17 PM
Nay Nay Naing က အာလူး နဲ့ စတော်ဘယ်ရီ ကိုပဲ စိုက်လို့ဖြစ်မယ်။ သဉ္ဇာကတော့ ကော်ဖီ နဲ့ နေကြာပဲစိုက်နေလို့ဖြစ်မှာပေါ့... :P
8/4/09 6:57 PM
ဒါကြောင့်မို့လို့ ဟိုလူတွေကပြောတာကိုး မြန်မာတွေအတွက်အလုပ်တွေပေါပါတယ်ဆိုတာ
9/4/09 2:02 AM
ကိုပီတိ>> ဟုတ်တယ်။ အာလူးကို level တက်ချင်တဲ့အခါလောက်မှသာ စိုက်ဖြစ်တာ။ အားလုံးထဲမှာ အာလူးခင်းက ကြည့်ရတာ အဆိုးဆုံးဘဲ။ လှလည်း မလှဘူး။ level တက်ဖို့ထက် ကိုယ့်လယ်လေး လှလှပပ ဖြစ်နေတာကိုဘဲ လိုချင်တာလေ။ :D
strike>> မှန်၏။ တို့တောင် ပရိုဂရမ်မာ အလုပ်ပြုတ်ရင် အိမ်ပြန် လယ်စိုက်ဖို့ စဉ်းစားထားတယ်။ :P
9/4/09 11:31 AM
can't read ur tips la najma. translate in malay la :p
10/4/09 2:40 PM
mira>> heehee.. dah start main farm town ke? First you have to plow the land, then buy seeds and plant. Harvest the next day. If you hire other people to harvest, you earn more when u sell the crops. Boleh cari kerja dekat Market.. Just shout "plz hire me" till somebody hire u. If u harvest at other ppl's land, u dapat 25% share. If u don't harvest when the crops are ready, it'll go waste afteraday. Add your friends to neighbour list, when u visit your neighbour, u also earn points. Short description :D I tak ingat perkataan dalam behasa melayu, so just translate using rojak language.
10/4/09 3:28 PM
facebook နဲ့မကင်းကွာရအောင် ဖန်တီးထားတဲ့ဂိမ်းထင်ပါရဲ့။ အဲ့လောက်ခဏခဏ တက်ကစားရအောင် အားပါဘူးအေ။
14/4/09 3:47 PM
ကိုလူသစ်>> ဟုတ်တယ်။ ဂိမ်းမကစားရင်တောင် Facebook ထဲ သိပ်ဝင်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီဂိမ်းကစားတာနဲ့ဘဲ တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး နှစ်နာရီလောက် Facebook ပေါ်ရောက်နေတာ။ လယ်စိုက်ချင်တော့လည်း မအားအားအောင် လုပ်ရတာပေါ့လေ။
16/4/09 11:29 AM
IE မှာလေ အစ်မပြောသလို try ကြည့်တာ လယ်တွေ ထပ်လို့ရဘူး .. ဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူး ... :(
7/5/09 12:22 PM
January>> အဲဒီ လယ်ထပ်ပြီး စိုက်တာကို သူတို့ လုံးဝ ပိတ်လိုက်ပြီ။ တစ်ပါတ်လောက်ရှီပြီ ပိတ်လိုက်တာ။ ကြားထဲမှာ space မခြားဘဲ ကပ်စိုက်တာလောက်ဘဲ ရတော့တယ်။ Settings (ညာဘက် အပေါ်က ပလယာလို ပုံမျိုးလေး) ကို နှိပ်ပြီး Remove space between fields ကို check လုပ်ရင်တော့ လယ်တွေကို ကပ်ပြီး စိုက်လို့ရတယ်။ :)
7/5/09 1:15 PM
:) thz ma thinzar
7/5/09 7:33 PM
အစ်မရေ... မြို့တက်တော့လေ၊ လယ်မစိုက်တော့နဲ့။ း)
23/5/09 12:14 PM
နွယ်ရိုး>> မြို့ရောက်နေပြီ။ အခု Yo Ville မှာ :D ပိတ်ရက်မှ ရွာပြန်လယ်စိုက်တော့တယ်။
28/5/09 12:30 PM
ကူးကူးလဲကစားတယ်.. level 26
ညည..ခြံကို Plow လုပ်ရတာ အရမ်းချိန်ကြာတယ်
29/5/09 8:23 AM
စန္ဒကူးမေ>>သဉ္ဖာက lvl 28 .. ပျင်းလာလို့ ဆက်မစိုက်တော့ဘူး။
29/5/09 12:32 PM
Facebook Quiz တစ်ခု လုပ်ကြည့်ခြင်း
A hasty tour guide &arushed tour (2)